02.02.20 Avyakt Bapdada Nepali Murli 18.11.85 Om Shanti Madhuban
भगवानको भाग्यवान बच्चाहरूका लक्षण
बापदादाले सबै बच्चाहरूको मस्तकमा भाग्यको रेखाहरू देखिरहनु भएको छ। हरेक बच्चाको मस्तकमा भाग्यको रेखा छ तर कुनै बच्चाहरूका स्पष्ट रेखा छन् भने कुनै बच्चाहरूको स्पष्ट रेखा छैनन्। जबदेखि भगवान बाबाको बन्यौ, भगवान अर्थात् भाग्य विधाता। भगवान अर्थात् दाता, विधाता। त्यसैले बच्चा बन्नाले भाग्यको अधिकार अर्थात् वर्सा सबै बच्चाहरूलाई अवश्य मिल्छ, तर त्यस मिलेको वर्सालाई जीवनमा धारण गर्नु, सेवामा लगाएर श्रेष्ठ बनाउनु, स्पष्ट बनाउनु– यसमा नम्बरवार छन् किनकि यो भाग्य जति स्वयं प्रति वा सेवा प्रति कार्यमा लगाउँछौ त्यति बढ्छ अर्थात् रेखा स्पष्ट हुन्छ। बाबा एक हुनुहुन्छ र दिनुहुन्छ पनि सबैलाई एक समान। बाबाले नम्बरवार भाग्य बाँड्नु हुन्न तर भाग्य बनाउने अर्थात् भाग्यवान बन्नेहरू यति ठूलो भाग्यलाई प्राप्त गर्नमा यथाशक्ति हुनाको कारण नम्बरवार हुन पुग्छन्। त्यसैले कसैको रेखा स्पष्ट छ, कसैको स्पष्ट छैन। स्पष्ट रेखा भएका बच्चाहरू स्वयं पनि हर कर्ममा आफूलाई भाग्यवान अनुभव गर्छन्। साथ-साथै उनीहरूको चेहरा र चलनबाट भाग्य अरूलाई पनि अनुभव हुन्छ। अरूले पनि यस्तो भाग्यवान बच्चाहरूलाई सोच्छन् र भन्छन्– यी आत्माहरू धेरै भाग्यवान छन्। यिनको भाग्य सदा श्रेष्ठ छ। आफूले आफैंसँग सोध– हर कर्ममा आफूलाई भगवानको बच्चा, भाग्यवान अनुभव गर्छु? भाग्य तिम्रो वर्सा हो। वर्सा कहिल्यै प्राप्त नहोस्, यो हुनै सक्दैन। भाग्यलाई वर्साको रूपमा अनुभव गर्छौ वा मेहनत गर्नु पर्छ? वर्सा सहज मिल्छ। मेहनत लाग्दैन। लौकिकमा पनि पिताको खजानामा, वर्सामा बच्चाको अधिकार स्वत: हुन्छ। नशा रहन्छ– पिताको वर्सा मिलेको छ। यस्तो भाग्यको नशा छ वा चढ्ने उत्रिने भइरहन्छ? अविनाशी वर्सा छ भने कति नशा हुनु पर्छ! एक जन्म त के अनेक जन्महरूको भाग्य जन्मसिद्ध अधिकार हो। यस्तो फलकले वर्णन गर्छौ। सदा भाग्यको झलक प्रत्यक्ष रूपमा अरूलाई देख्नमा आओस्। फलक र झलक दुवै छन्? गुप्त रूपमा छ वा जागृत रूपमा छ? भाग्यवान आत्माहरूको निशानी– भाग्यवान आत्मा सदा चाहे कोखमा हुर्किन्छ, चाहे गलैंचामा हिंड्छ, झुलाहरूमा झुल्छ उसले माटोमा पाउ राख्दैन, कहिले पाउ मैलो हुँदैन। तिनीहरू गलैंचामा हिंड्छन् र तिमी चाहिं बुद्धि रूपी पाउले सदा जमिनको बदलामा फरिश्ताहरूको दुनियाँमा रहन्छौ। यस पुरानो माटोको दुनियाँमा बुद्धि रूपी पाउ राख्दैनौ अर्थात् बुद्धि मैलो गर्दैनौ। भाग्यवान माटोको खेलौनासँग खेल्दैनन्। सदा रत्नहरूसँग खेल्छन्। भाग्यवान सदा सम्पन्न रहन्छन् त्यसैले इच्छा मात्रम् अविद्याको स्थितिमा रहन्छन्। भाग्यवान आत्मा सदा महादानी पुण्य आत्मा बनेर अरूको पनि भाग्य बनाइरहन्छन्। भाग्यवान आत्मा सदा ताज, तख्त र तिलकधारी हुन्छन्। भाग्यवान आत्मा जति भाग्यको अधिकारी, त्यति नै त्यागी आत्मा हुन्छन्। भाग्यको निशानी त्याग हो। त्यागले भाग्यलाई स्पष्ट गर्छ। भाग्यवान आत्मा, सदा भगवान समान निराकारी, निरहंकारी र निर्विकारी– यी तीनै विशेषताहरूले भरपुर हुन्छन्। यी सबै निशानीहरू आफूमा अनुभव गरेका छौ? भाग्यवानको लिस्टमा त छौ नै। तर यथाशक्ति हौ वा सर्वशक्तिमान् हौ? मास्टर त हौ नि? बाबाको महिमामा कहिल्यै यथा शक्तिमान् वा नम्बरवार भन्न सकिँदैन, सदा सर्वशक्तिमान् भनिन्छ। मास्टर सर्वशक्तिमान् फेरि यथाशक्ति किन? सदा शक्तिमान्। यथा शब्दलाई बदलेर सदा शक्तिमान् बन र बनाऊ। बुझ्यौ?
कुनचाहिँ जोन आएका छन्? सबै वरदान भूमिमा आएर वरदानहरूले झोली भरिरहेका छौ नि। वरदान भूमिको एक-एक चरित्रमा, कर्ममा विशेष वरदान भरिएका छ। यज्ञ भूमिमा आएर चाहे तरकारी काट्छौ, अन्न केलाउँछौ, यसमा पनि यज्ञ सेवाको वरदान भरिएको छ। जस्तै यात्रामा जान्छन्, मन्दिरको सफाई गर्नु पनि एक ठूलो पुण्य सम्झन्छन्। यस महातीर्थ वा वरदान भूमिको हर कर्ममा, हर कदममा वरदान नै वरदान भरिएको छ। झोली कति भरेका छौ? पूरा भरेर जान्छौ वा यथाशक्ति? जति पनि, जहाँबाट आए तापनि मेला मनाउन आएका हौ। मधुवनमा एक संकल्प पनि वा एक सेकेण्ड पनि व्यर्थ नजाओस्। समर्थ बन्ने यो अभ्यासले आफ्नो स्थानमा पनि सहयोग दिनेछ। पढाइ र परिवार– पढाइको पनि लाभ लिनु र परिवारको पनि अनुभव विशेष गर्नु। बुझ्यौ!
बापदादाले सबै जोनलाई सदा वरदानी, महादानी बन्ने बधाई दिइरहनु भएको छ। अरू मानिसहरूको उत्सव समाप्त भयो तर तिम्रो त उत्साह भरिएको उत्सव हो। सदा बडा दिन हो त्यसैले हर दिन बधाई नै बधाई छ। महाराष्ट्र सदा महान् बनेर महान् बनाउनेवाला वरदानहरूले झोली भर्नेवाला हौ। कर्नाटक सदा आफ्नो हर्षित मुखद्वारा सदा हर्षित र अरूलाई पनि सदा हर्षित बनाउँदै, झोली भर्दै जाऊ। यू.पी. ले के गर्ने छौ? सदा शीतल नदी समान शीतलताको वरदान दिएर शीतला देवी बनेर शीतल देवी बनाऊ। शीतलताले सदा सर्वको सबै प्रकारको दु:ख मेटाऊ। यसरी वरदानहरूले झोली भर। अच्छा!
सदा श्रेष्ठ भाग्यको स्पष्ट रेखाधारी, सदा बाबा समान सर्व शक्तिहरू सम्पन्न, सम्पूर्ण स्थितिमा स्थित रहने, सदा ईश्वरीय झलक र भाग्यको फलकमा रहने, हर कर्मद्वारा भाग्यवान बनेर भाग्यको वर्सा दिलाउने– यस्ता मास्टर भगवान, श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चाहरूलाई बापदादाको याद-प्यार एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद-प्यार एवं नमस्ते।
बडी दादीहरूसँग अव्यक्त बापदादाको भेटघाट:–
आदिदेखि अहिलेसम्म जो हर कार्यमा साथ चल्दै आइरहेका छन्, उनीहरूको यो विशेषता हो– जसरी ब्रह्मा बाबाले हर कदममा अनुभवी बनेर अनुभवको अथोरिटीद्वारा विश्वको राज्यको अथोरिटी लिन्छन्, त्यसैगरी तिमीहरू सबै धेरै समयदेखि हर प्रकारको अनुभवको अथोरिटीको कारण धेरै समयको राज्यको अथोरिटीमा पनि साथी बन्नेवाला हौ। जसले आदिदेखि संकल्प गरे– जहाँ बसाउनु हुन्छ, जसरी चलाउनु हुन्छ त्यसरी नै साथ चल्ने छौं। त्यसैले साथ चल्नेको पहिलो प्रतिज्ञा बापदादाले निभाउनु नै पर्ने हुन्छ। ब्रह्मा बाबाको पनि साथ रहनेवाला हौ। राज्यमा पनि साथ रहने छौ, भक्तिमा पनि साथ रहने छौ। साकारमा त तिमीहरू सबै १४ वर्ष साथमा रह्यौ, संगमयुगको १४ वर्ष कति वर्ष समान हुन गयो। संगमयुगको यतिका समय साकार रूपमा साथ रहेका थियौ, यो पनि धेरै ठूलो भाग्य हो। फेरि बुद्धिबाट पनि साथ होस्, घरमा पनि साथ हुने छौ, राज्यमा पनि साथ हुने छौ। ठीकै छ, सिंहासनमा थोरै बस्लान् तर राज खानदानको नजिक सम्बन्धमा, सारा दिनको दिनचर्यामा साथ रहने पार्ट अवश्य खेल्ने छौ। त्यसैले यो आदिदेखि साथ रहने प्रतिज्ञा सारा कल्प नै चलिरहने छ। भक्तिमा पनि धेरै समय साथ रहने छौ। यो पछाडिको जन्ममा अलिकति कोही टाढा, कोही नजिक तर फेरि पनि सारा कल्प कुनै न कुनै रूपमा साथ रहन्छौ। यस्तो प्रतिज्ञा छ नि! त्यसैले तिमीहरूलाई सबैले कुन नजरले हेर्छन्! बाबाको रूप हो। यसलाई नै भक्तिमा उनीहरूले भनेका छन्– यी सबै भगवानका रूप हुन्! किनकि बाबा समान बन्छौ नि! तिम्रो रूपबाट बाबा देखिनमा आउँछ त्यसैले बाबाको रूप भनिदिन्छन्। जो बाबाको साथ रहनेवाला छन् उनको यही विशेषता हुनेछ, उनलाई देखेर बाबा याद आउने छ, उनलाई याद गर्दैनन्, बाबालाई याद गर्छन्। तिनीहरूबाट बाबाको चरित्र, बाबाको दृष्टि, बाबाको कर्म, सबै अनुभव हुनेछ। ती स्वयं देखिदैनन् तर तिनीद्वारा बाबाको कर्म वा दृष्टि अनुभव हुन्छ। यही विशेषता हो अनन्य, समान बच्चाहरूको। सबै यस्ता हौ नि! तिमीमा त फँस्दैनन् हैन! यो त भन्दैनन् फलानी धेरै असल छिन्, होइन। बाबाले यिनीहरूलाई राम्रो बनाउनु भएको हो। बाबाको दृष्टि, बाबाको पालना यिनीहरूबाट मिल्छ। बाबाको महावाक्य यिनीहरूबाट सुन्दछन्। यो विशेषता होस्। यसलाई भनिन्छ– प्यारा पनि, न्यारा पनि। प्यारा ठीकै छ सबैको हौ तर फँसाउनेवाला नहोस्। बाबाको सट्टा तिमीलाई याद नगरून्। बाबाको शक्ति लिनको लागि बाबाको महावाक्य सुन्नको लागि तिमीलाई याद गरून्। यसलाई भनिन्छ– ‘प्यारा पनि र न्यारा पनि।’ यस्तो ग्रुप हो नि! कुनै त विशेषता होला नि जो साकारको पालना लिएका छौ– विशेषता त होला नि। तिम्रो पासमा आएमा के सोध्छन्– बाबाले के गर्नुहुन्थ्यो, कसरी चल्नुहुन्थ्यो... यही याद आउँछ नि! यस्तो विशेष आत्माहरू हौ। यसलाई भनिन्छ– डिभाइन युनिटी। डिभाइनको स्मृति दिलाएर डिभाइन बनाउँछौ, त्यसैले डिभाइन युनिटी। ५० वर्ष अविनाशी रहेका छौ त्यसैले अविनाशी भवको बधाई छ। कैयौं आए कैयौं चक्र लगाउन गए। तिमीहरू त अनादि अविनाशी हुन गयौ। अनादिमा पनि साथ, आदिमा पनि साथ। वतनमा पनि साथ रह्यौ भने सेवा कसरी गर्ने! तिमी त अलिकति आराम पनि गर्छौ, बाबालाई आरामको पनि आवश्यकता हुँदैन। बापदादा यसबाट पनि छुटिहाल्नु भयो। अव्यक्तलाई आरामको आवश्यकता छैन। व्यक्तलाई आवश्यकता छ। यसमा आफू समान बनाएमा काम समाप्त हुन जान्छ। फेरि पनि हेर जब कुनै सेवाको मौका बन्छ भने बाबा समान अथक बनिहाल्छौ। थाक्दैनौ। अच्छा!
दादीजीसँग:– बचपनदेखि बाबाले ताजधारी बनाउनु भएको छ। आउनासाथ सेवाको जिम्मेवारीको ताज लगाएँ र समय प्रति समय जुन पनि पार्ट चल्यो– चाहे गरिबीको पार्ट चल्यो, चाहे मौजको पार्ट चल्यो, सबै पार्टमा जिम्मेवारीको ताज ड्रामा अनुसार धारण गर्दै आएका छौ। अव्यक्त पार्टमा पनि ताजधारी निमित्त बन्यौ। त्यसैले यो विशेष आदिदेखिको पार्ट हो। सदा जिम्मेवारी निभाउनेवाला। जसरी बाबा जिम्मेवार हुनुहुन्छ, त्यस्तै जिम्मेवारीको ताजधारी बन्नेको पनि विशेष पार्ट छ। अन्त्यमा पनि दृष्टिद्वारा ताज, तिलक सबै दिएर जानु भयो। त्यसैले तिम्रो जुन यादगार छ नि त्यसमा ताज अवश्य हुनेछ। जस्तै कृष्णलाई बचपनदेखि ताज देखाउँछन् भने यादगारमा पनि बचपनदेखि ताजधारी रूपले पुजिन्छन्। अरू सबै साथी छन् तर तिमी ताजधारी हौ। साथ त सबैले निभाउँछन् तर समान रूपमा साथ निभाउनु, यसमा अन्तर छ।
कुमारहरूसँग:– १)कुमार अर्थात् निर्बन्धन। सबैभन्दा ठूलो बन्धन मनको व्यर्थ संकल्पको हो। यसमा पनि निर्बन्धन। कहिलेकाहीँ यस बन्धनले बाँध्न त बाँध्दैन? किनकि संकल्प शक्ति हर कदममा कमाईको आधार हो। यादको यात्रा केको आधारमा गर्छौ? संकल्प शक्तिको आधारमा बाबाको पासमा पुग्छौ नि? अशरीरी बन्छौ। त्यसैले मनको शक्ति विशेष हो। व्यर्थ संकल्पले मनको शक्तिलाई कमजोर गरिदिन्छ त्यसैले बन्धनदेखि मुक्त बन। कुमार अर्थात् सदा तीव्र पुरुषार्थी किनकि जो निर्बन्धन हुन्छ उसको गति स्वत: तीव्र हुन्छ। बोझ भएकाहरू सुस्त गतिले हिँड्छन्। हल्का सदा तीव्रगतिले हिँड्छन्। अब समय प्रमाण पुरुषार्थको समय गयो। अब तीव्र पुरुषार्थी बनेर लक्ष्यसम्म पुग्नु छ।
२) कुमारहरूले पुरानो व्यर्थको खातालाई समाप्त गर्यौ? नयाँ खाता समर्थ खाता हो। पुरानो खाता व्यर्थको हो। त्यसैले पुरानो खाता समाप्त भयो। त्यसै पनि हेर व्यवहारमा कहिल्यै पुरानो खाता राखिँदैन। पुरानोलाई समाप्त गरेर अर्को खातालाई बढाइरहन्छन्। त्यसैगरी यहाँ पनि पुरानो खाता समाप्त गरेर सदा नयाँ भन्दा पनि नयाँ हर कदममा समर्थ हुनु छ। हर संकल्प समर्थ होस्। जस्तो बाबा त्यस्तै बच्चाहरू। बाबा समर्थ हुनुहुन्छ त्यसैले बच्चाहरू पनि बाबालाई अनुसरण गरेर समर्थ बन्नु छ।
माताहरूसँग:– १)माताहरू कुन एउटा गुणमा विशेष अनुभवी हुन्छन्? त्यो विशेष गुण कुनचाहिँ हो? (त्याग, सहनशीलता) अरू पनि कुनै गुण छन्? माताहरूको स्वरूप विशेष दयालु हुन्छ। माताहरू दयालु हुन्छन्। तिमी बेहदका माताहरूलाई बेहदका आत्माहरू प्रति दया आउँछ? जब दया लाग्छ तब के गर्छन्? जो दयालु हुन्छन् तिनीहरू सेवा नगरी रहन सक्दैनन्। जब दयालु बन्छौ, तब अनेक आत्माहरू प्रति कल्याण भई नै हाल्छ। त्यसैले माताहरूलाई कल्याणी पनि भनिन्छ। कल्याणी अर्थात् कल्याण गर्नेवाला। जसरी बाबालाई विश्व कल्याणकारी भनिन्छ, त्यसैगरी माताहरूलाई पनि विशेष बाबा समान कल्याणीको टाइटल मिलेको छ। यस्तो उमंग आउँछ? केबाट के बन्यौ! स्वको परिवर्तनबाट अरूको लागि पनि उमंग- उत्साह आउँछ। हद र बेहद दुवै सेवाको सन्तुलन छ? त्यो सेवाबाट त हिसाब चुक्ता हुन्छ। त्यो हदको सेवा हो। तिमीहरू त बेहदका सेवाधारी हौ। जति सेवाको उमंग-उत्साह स्वयंमा हुन्छ, त्यति सफलता हुन्छ।
२) माताहरू आफ्नो त्याग र सफलताद्वारा विश्वको कल्याण गर्न निमित्त बनेका छन्। माताहरूमा त्याग र तपस्याको विशेषता हुन्छ। यी दुई विशेषताले सेवाको निमित्त बनेर अरूलाई पनि बाबाको बनाउनमा व्यस्त रहन्छौ? संगमयुगी ब्राह्मणहरूको काम नै हो सेवा गर्नु। ब्रह्मणहरू सेवा विना रहनै सक्दैनन्। जसरी नामधारी ब्राह्मणहरूले कथा अवश्य सुनाउँछन्। त्यसैले यहाँ पनि कथा सुनाउनु अर्थात् सेवा गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले जगतमाता बनेर जगतको लागि सोच। बेहदका बच्चाहरूको लागि सोच। केवल घरमा नबस। बेहदको सेवाधारी बनेर सदा अगाडि बढिराख। हदमा ६३ जन्म रह्यौ, अब बेहद सेवामा अगाडि बढ।
विदाइको समयमा सबै बच्चाहरूलाई याद-प्यार
सबैतिरका स्नेही सहयोगी बच्चाहरूप्रति बापदादाको विशेष स्नेह सम्पन्न याद-प्यार स्वीकार होस्। आज बापदादाले सबै बच्चाहरूलाई सदा निर्विघ्न बनेर, विघ्न विनाशक बनेर विश्वलाई निर्विघ्न बनाउने कार्य गरेकोमा बधाई दिइरहनु भएको छ। हरेक बच्चाले यही श्रेष्ठ संकल्प गर्छन्– सेवामा सदा अगाडि बढौं र यही श्रेष्ठ संकल्पले सेवामा सदा अगाडि बढाई पनि रहेको छ र बढाई रहने छ। सेवाको साथ साथमा स्व-उन्नति र सेवाको उन्नतिको सन्तुलन राखेर अगाडि बढ्दै जाऊ, तब बापदादा र सर्व आत्माहरूबाट जसको लागि निमित्त बन्छौ, तिनीहरूको दिलको आशीर्वाद प्राप्त भइरहने छ। त्यसैले सदा ब्यालेन्सद्वारा ब्लेसिङ्ग लिँदै अगाडि बढिराख। स्व-उन्नति र सेवाको उन्नति दुवै साथ-साथै रहनाले सदा र सजिलै सफलता स्वरूप बन्ने छौ। सबैले आ-आफ्नो नामले विशेष बापदादाको याद-प्यार एवं नमस्ते स्वीकार गर्नु। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुडमर्निङ्ग, नमस्ते। अच्छा! ओम् शान्ति।
सबैलाई खुशीको खबर सुनाउने खुशीको खजानाबाट भरपुर भण्डार भव
सदा आफ्नो यो स्वरूपलाई सामुन्ने राख– हामी खुशीको खजानाले भरपुर भण्डार हौं। जुन पनि अनगिन्ती र अविनाशी खजाना मिलेका छन् ती खजानालाई स्मृतिमा ल्याऊ। खजानालाई स्मृतिमा ल्याउनाले खुशी हुन्छ र जहाँ खुशी हुन्छ त्यहाँ सदाकालको लागि दु:ख दूर हुन्छ। खजानाको स्मृतिले आत्मा समर्थ बन्छ, व्यर्थ समाप्त हुन्छ। भरपुर आत्मा कहिल्यै हलचलमा आउँदैन र ऊ स्वयं पनि खुशी रहन्छ र अरूलाई पनि खुशीको खबर सुनाउँछ।
योग्य बन्नु छ भने कर्म र योगको सन्तुलन राख।